Tutankhamun | Coinfalls ကာစီနို
Tutankhamun ရှိပါတယ်တဲ့အံ့သြဖွယ်ဗီဒီယို slot ကဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်5ရက်ကြောင့်မှားယွင်းခြင်းနှင့် 20 paylines. ဒါဟာအီဂျစ်အခြေစိုက်ဆောင်ပုဒ် slot နှစ်ခု re-သွားရောက်ခဲ့ပြီးနှငျ့သငျပိုကြီးကိုအနိုင်ပေးရရှေးဟောင်းသင်္ကေတကိုအသုံးပြုခဲ့သည်.
အီဂျစ်ဖာရောဘုရငျရှိ၏, အသကျရှငျသင်္ဂြိုဟ်လေ၏နှင့်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သေဆုံးနှစ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူ 1922 Howard Carter ကအားဖြင့်.
သငျသညျ Coinfalls ကာစီနိုမှာအခမဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးဒီဂိမ်းကိုကစားနှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသောကြိုဆိုအထုပ်ခံစားနိုငျ 200% £ 50,00 ၏ကနဦးအပ်ငွေအပေါ်. ထို့အပြင်, အဲဒီလိုနေ့၏ဂိမ်းအဖြစ်အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ပရိုမိုးရှင်းလည်းရှိ, Cashback နေ့က, နှင့်တစ်ဦးအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေအလုပ်များသငျသညျကိုစောင့်ရှောက်ရန်.
လက်တွေ့ကျကျအားကစားပြိုင်ပွဲ Tutankhamun slot ကဂိမ်းဆော့ဗ်ဝဲကိုပံ့ပိုးပေးသူများမှာ. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဂိမ်းလက်တော်၌လက်သွား. ဒီဒီဇိုင်နာကြီးမြတ်ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်အတူဂိမ်းကိုဒီဇိုင်းခဲ့ပြီးကစားသမားမှလွှမ်းမိုးသောတုန့်ပြန်ခဲ့.
Tutankhamun ဗီဒီယို slot က Coinfalls ကာစီနိုမှာပျော်စရာများအတွက် play မှာကစားနိုင်ပါတယ်. သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး 0.01p မှ£ 100.00 တစ်လောင်းကစားငွေပမာဏနေရာဖြစ်ပါသည်. သငျသညျထားပြီတစ်ချိန်ကလောင်းကစားအလှည့်ဖျား button ကိုထိမှန်နှင့်အဆင့်မြင့်ဆုလာဘ်ခံယူ.
ဒီဂိမ်းကဲ့သို့သောအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများပါဝင်ပါသည် 10, 9, J ကို, မေး, တစ်ဦးက, နှင့်ငွေကျပ်သင် x80 မှတက်၏မြှောက်ကိန်းဆုလာဘ်ပေးဆောင်တံ့သော. ဒါဟာအစအဲဒီလိုပွင့်ကဲ့သို့မြင့်မားတန်ဖိုးကိုသင်္ကေတကိုအသုံးပြုသည်, ဖန်းအိုး, Horus ၏မျက်လုံး, နှင့်ရွှေသင်္ကေတ.
ဤရွေ့ကားသင်္ကေတသုံးသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို၏ပေါင်းစပ်၌ထင်ရှားရန်လိုအပ်ပါတယ်ပြီးနောက်သင် x1 အထိအနိုင်ရမြျှောလငျ့နိုငျ, 000 တိုးပွားစေ. အဆိုပါဖာရောဘုရင်၏မျက်နှာဖုံး x40 ၏အခြေစိုက်စခန်းထီပေါက်ငွေပမာဏကိုအနိုင်ရရန်သင့်အားဖွင့်ရိုင်းသင်္ကေတအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်, 000.
ရိုင်းသင်္ကေတကိုလည်းကြဲဖြန့်လိုဂိုမှတပါးရက်ကြောင့်မှားယွင်းပေါ်မှာရှိသမျှသောရုပ်တုဆင်းတုကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်. သင်တို့သည်လည်း x10 တူအခြားတိုးပွားစေအနိုင်ရနိုင်, 000, x500, x100, နှင့် x40.
အဆိုပါအခမဲ့လှည့်ခြင်းများအဖြစ်မကြာမီကြဲဖြန့်ပုံရိပ်တွေကိုသငျသညျရလိမ့်မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုဆင်းသက်ရှိပါတယ်အဖြစ် activated လိမ့်မည် feature 15 X3 ရဲ့မြှောက်ကိန်းနှင့်အတူအခမဲ့လှည့်ခြင်းများ. ဒီရှေးဟောင်းရှာဖွေနေရက်ကြောင့်မှားယွင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ RTP ဆွဲဆောင် 95.39% နှင့်ဤဂိမ်းထဲမှာရရှိနိုင်သည့် Autoplay ကို mode ကိုလည်းရှိပါတယ်.
Tutankhamun slot ကခြေရင်းထီပေါက်ငွေပမာဏကိုကူညီစေခြင်းငှါစေတနာစိတ်နှင့်ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဂရပ်ဖစ်များနှင့်နောက်ခံတေးဂီတထိပ်တန်းထစ်အရည်အသွေးရှိပါတယ်. ဒီစိတ်လှုပ်ရှားစရာ slot ကဂိမ်းကစားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏လောင်းကစားရုံမှာယခု Register နှင့်တစ်ဦးကြိုဆိုဆုကြေးငွေပျော်မွေ့ 200% သင်ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေအပေါ်.